စတင်သူများအတွက် Algorithmic Trading: 🥇အများဆုံးအမြတ်! - ကုန်သွယ်ရေးမေလ ၂ ရက်၊
Algorithmic Trading ၏2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
Algorithmic trading - သို့မဟုတ် 'algo trading' သည်ပရိုဂရမ်ကြိုကွန်ပျူတာကိုသင့်ကိုယ်စားသုတေသနလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အယူအဆမှာအခြေခံ algorithm သည်စျေးကွက်အချက်အလက်များကိုသင်သို့မဟုတ်ငါထက်သိသိသာသာပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် algorithmic ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကအလွန်ရှာဖွေကြသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့် algorithm သည်၎င်းကိုတည်ဆောက်သူနှင့်သာတူသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အကယ်၍ ဆော့ဝဲလ်ကိုညံ့ဖျင်းစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားပါက၊ သင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသွားနိုင်ခြေရှိသည်။
algo ကုန်သွယ်ရေးအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်ဖန်တီ? သို့ဆိုလျှင် Algorithmic Trading အကြောင်းလေ့လာခြင်း2Trade 2022 လမ်းညွှန်ကိုသေချာဖတ်ပါ။
မှတ်စု: သင့်ကိုယ်စား အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ပရိုဂရမ်တစ်ခုအား ခွင့်ပြုရန် အဆင်မပြေပါက၊ ၎င်းသည် အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် စျေးကွက်အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုများကို အလိုအလျောက် algorithm မှ အကြံပြုပါသည်။
Algorithmic Trading ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင် algorithmic trading သည်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သာမှီခိုသည့်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်နည်းပညာသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲမှယုံကြည်မှုရှိလျှင်ကုန်သွယ်မှုသည်အဆင်ပြေသည်ဟုဆိုလျှင်သက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်အမိန့်များကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုမဆွဲဘဲငွေရှာသည်။
ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲမှာစျေးကွက်ထက်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့် algorithmic trading program တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအတိုင်းလိုက်နာရန်သာညွှန်ကြားထားသောကြောင့်တစ် ဦး ပြောသူအား“ စဉ်းစား” နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် algorithms သို့မဟုတ် machine learning technology ကိုအခြေခံသည့် software program များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် algorithmic trading software သည် ၁၂ နာရီအတွင်းစျေးနှုန်း ၅% ကျော်ကျသောအခါအဓိကကျသောငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုဝယ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်ဆိုပါစို့။ ၎င်းကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ဒုတိယအချက်မှာ algo trading bot သည်အကျိုးရှိစွာရပ်တန့ ်၍ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအမှာစာများနှင့်အတူ entry order တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်အခြေခံကျသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် algorithm တစ်ခုကကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကုန်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်၏အလားအလာသည်အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကို ၂၄/၇ အရစစ်ဆေးနိုင်သည့်အလားအလာရှိရုံသာမကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ ထို့အပြင်အရေအတွက်၏ကန့်သတ်မရှိ ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ အဆိုပါ algorithmic bot ကိုလိုက်နာရန်ညွှန်ကြားနိုင်ကြောင်း။ ဤသည်အနုညာတစီရင်ကုန်သွယ်အပေါ်ဗဟိုပြုမဟာဗျူဟာများ, နောက်ပြန်ဆုတ်ကုန်သွယ်, အရှိန်အဟုန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပင်အမိန့်လိုက်ဖမ်းပါဝင်နိုင်သည်။
Algorithmic Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ်ပါယျမရှိဘဲမရှိဘဲ 24/7 လုပ်ကိုင်သည်
သင် algorithm ကိုညံ့ဖျင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျှင်သင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်
အွန်လိုင်းအာကာသထဲရှိ algorithmic trading အချို့သည်လိမ်လည်မှုများဖြစ်သည်
ဘယ်လို Algorithmic ကုန်သွယ်အလုပ်ဖြစ်သနည်း
algorithmic trading သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန် 'algorithmic' နှင့် 'trading' ဟူသောဝေါဟာရနှစ်ခုကိုခွဲရန်လိုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် software ကိုမည်သို့အုပ်ချုပ်သည်ကိုအခြေခံကျနိုင်သည်။
နာမတော်ကိုအမှီပြု။ ဖော်ပြသကဲ့သို့, algorithmic ကုန်သွယ်တစ်ခု algorithm ကိုအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေသည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်အွန်လိုင်းနယ်ပယ်ရှိဘဝလမ်းလျှောက်တိုင်းတွင် algorithms များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် Amazon ကိုကြည့်ရှု။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်စိတ်ဝင်စားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကြံပြုနေသည်ကိုတွေ့သောအခါ၎င်းသည်သမိုင်းဝင်အချက်အလက်များကိုကြည့်သည့် algorithm ကိုအခြေခံသည်။
၎င်းသည်သင်ယခင်ကသင်ဆိုက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရှာဖွေမှုများသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူမှုများသို့မဟုတ်တိကျသောထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်သင်သုံးစွဲခဲ့သည့်ကြာချိန်များပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်တွေ့မြင်ရသောအကြံပြုထားသည့်အရာများသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန္ဒများနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အနီးကပ်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသည်တိုက်ဆိုင်မှု မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်သည်။
ဒီတော့ဒီဟာက algorithmic trading နဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင့်စျေးဝယ်မှု ဦး စားပေးများကိုဆန်းစစ်မည့်အစားအခြေခံနည်းပညာသည်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ရှိသမိုင်းဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ 'scan' လို့ပြောရင် ကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြင့်မားသောသုတေသနကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဤခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၊ မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်များ၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်စသည့်မက်ထရစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းနည်းပညာကိုနောက်ပိုင်းတွင် RSI (Relative Strength Index)၊ MACD (Moving Average Convergence Divergence) နှင့် Bollinger Bands ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများစွာဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ဖြစ်ရပ်၏ဒုတိယအပိုင်းသည် 'ကုန်သွယ်ခြင်း' ကိုအဓိကထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ algorithmic trading software သည်ခြေရာခံနေသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော entry point တစ်ခုသို့အလံပြပြီးသောအခါ system သည်၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လူ့ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်မည်သည့် ၀ င်ငွေနှင့်ထွက်ပေါက်ဈေးကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ရန်ရှည်လျားစွာရေးဆွဲထားသောအတွေးစဉ်ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, algorithmic ကုန်သွယ် software ကို milliseconds အတွင်းအရေးအပါဆုံး - entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်စျေးနှုန်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာအားလုံးဟာသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီး၊ ဒီအချက်အလက်တွေကလက်ရှိစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်နေတာလဲ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အတွက်ဤအရာသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်းဆိုတာသက်သေပြထားသော algo trading protocol သည်သင့်အားကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြင့်ငွေရှာရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များမည်သို့လုပ်ကိုင်သည်ကိုအတွေ့အကြုံမလိုဘဲရေရှည်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
အဘယ်အရာကို - လျှင်မြင်ကွင်းများ
သင်ယခင်က Microsoft Excel ကိုအလုပ်ခွင်အခြေပြု setting တွင်အသုံးပြုခဲ့ပါကမည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်ပြုလုပ်ပါကဤသည်သည်ကြီးလှပေသည်။ ၎င်းသည် algorithmic trading platform များမည်သို့လည်ပတ်သည်ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက်, what-if function သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီပါကတစ်ခုခုကို 'လုပ်ဆောင်' ရန်ကြိုးစားသည်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်နေ့တိုင်းသောက်ရေပုလင်းတစ်ခွက်ကိုသောက်သည်ဆိုပါစို့။ သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးပုလင်းသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်နှင့်အနီးဆုံးဆိုင်သို့သွားပြီးအခြားသေတ္တာနှစ်လုံးကိုဝယ်လိုက်သည်။
ညီမျှခြင်း၏ 'ဘာ' အပိုင်းသည် ညီမျှခြင်း၏ 'if' အစိတ်အပိုင်းကို အစပျိုးသောအခါတွင် သင်လုပ်ဆောင်သည့် ရေသန့်ဗူးများ ထပ်မံဝယ်ယူရန် ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဥပမာတွင်၊ 'if' သည် သင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စတော့ရှယ်ယာ ရေသန့်ဘူးတွေက တစ်ယူနစ်ပဲ ကျသွားတာ။
algorithmic ကုန်သွယ်၏အခြေအနေတွင်, 'what' 'ကုန်သွယ်နေရာချခြင်း၏လုပ်ရပ်ရည်ညွှန်းသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအလားအလာရှိသောကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းကိုပြသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်း 'if' ကိုစတင်သောအခါ၎င်းသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
pre-conditioned algorithm မှတစ်ဆင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ what-if သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်စေရန်အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ပါ။
algo trading software သည် NYSE စာရင်းရှိစတော့များကိုစစ်ဆေးရန်စီစဉ်ထားသည်
ယင်း၏ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အခြေအနေတစ်ခုမှာ RSI ကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီခန့်အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်
'if' သည် algorithm ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး RSI သည် ၇၁ ဖြစ်သည်
အဆိုပါ '' '' algorithm ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု '' ရောင်း '' အမိန့်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်
ထို့အပြင် 'what' function ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်သင့်တော်သော ၀ င်ရောက်မှုနှင့်ထွက်ပေါက်အမိန့်များဖြစ်သည်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း what-if လုပ်ဆောင်ချက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား RSI 70 ထက်ကျော်လွန်သောအခါ Blue-Chip စတော့များကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအချက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်အမင်းဝယ်ယူခြင်းခံရသည်ကိုညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့်၊
Algorithmic Trading ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဆဲ algorithmic ကုန်သွယ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချမဟုတ်လော အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် algorithmics သည်လူ့ကုန်သည်များထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအဓိကအကြောင်းအရင်းအချို့ကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
algo trading protocol အပေါ်မှီခိုတဲ့အခါစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ပထမအကျိုးကျေးဇူးကတော့အကန့်အသတ်မရှိသုတေသနလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာခြင်း (၂) ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏသတိပြုမိသည့်အတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ရွေးချယ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများသို့မကြာခဏရောက်ရှိသွားတတ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှေ နှင့် ငှေ, ဒီသင်သည်သတ္တုအာကာသအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားတစ်ခုချင်းစီကိုသုတေသနပြုရန်ဖြစ်နိုင်ချေ၏ဘုံအခြေအနေထက်ကျော်လွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဤကြိုးစားခဲ့လျှင်, သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အားလုံးကုန်သွယ်ရေး၏ဂျက်နှင့်အဘယ်သူအားမျှ၏မာစတာဖြစ်လိမ့်မယ်။
ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် algorithmic trading software သည်လူသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်အတူကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်စွာပင်၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်အလွန်အကျွံခြိမ်းခြောက်မှုလုံးဝမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
✔️တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီရောင်းဝယ်ပါ
လူ့ကုန်သည်များသည်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီခန့်ကြာသောသုတေသနအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာမက၊ အမှာစာများချသည့်အခါတွင်လည်းထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အချိန်ပြည့် Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အတွက် ၈ နာရီပုံမှန်နေ့ကိုယူကြပါစို့။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်နာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးနိုင်ပြီးကျန်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအပေါ်မူတည်သည်။
တစ်ဖက်တွင်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြင့်အလွန်ရက်ရောစွာလူနေမှုဘ ၀ ကိုလုပ်ကြောင်းလူသိများကြသည်။ တစ်ရက်တွင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်သုတေသန လုပ်၍ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်လျှင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်မည်မျှလုပ်လိမ့်မည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
သေချာတာပေါ့၊ ဒါကလူ့ ဦး နှောက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နေရာတွေထက်ကျော်လွန်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်စွာပရိုဂရမ်ရေးထားတဲ့ algorithmic trading protocol မဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်အလုပ်လုပ်သော algo trading bot ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင် ၂၄/၇ ထိထိထိရောက်ရောက်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
လူ့ကုန်သည်များရင်ဆိုင်နေရသောအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုမှာစိတ်ခံစားမှုများဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များတောင်မှစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်အခါအားလျော်စွာစိတ်သက်သာမှုရစေသည်။ coronavirus ကူးစက်ရောဂါကိုဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ယူကြပါစို့။
ရက်သတ္တပတ် ၁-၂ ပတ်အတွင်းတွင် S&P 500 ၏အကြိုက်သည် ၃၀% နီးပါးကျလိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ရာထူးကြီးများကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများသည်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်စည်းကမ်းရှိသည့်ချဉ်းကပ်မှုမှကင်းဝေးရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ algorithmic trading bot သည် software တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး 'what-if' အခြေအနေများကိုလိုက်နာရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်အဓိပ်ပါယျမရှိသောဂရုမစိုက်ပါဘူး။
algorithmic ကုန်သွယ်ခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ၎င်းသည်သင့်အားဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများမရှိဘဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သာမာန်အားဖြင့်၊ သင်သည်ကျွမ်းကျင်ပြီးလနှင့်ချီ။ ကြာနိုင်သည့်ရှည်လျားခက်ခဲသောသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်သည်။
ဤအချက်၏အဓိက ဦး စားပေးအချက်မှာဇယားများ၊ စျေးနှုန်းများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများကိုမည်သို့ဖတ်ရှုနားလည်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် algo ကုန်သည်တစ်ယောက်သည်သင့်ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုလုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အခါနည်းပညာတစ်ခုအနေနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် bot ကိုလက်ချောင်းမလိုဘဲပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ယခုသင် algo trading software မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်လာပြီဆိုလျှင် protocol ကိုစီမံရန်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲမည့်နည်းဗျူဟာအချို့ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။
အရှိန်အဟုန်ကုန်သွယ်မှုသည်ဝါရင့်ကုန်သည်များအသုံးပြုသည့်ရေပန်းစားသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သဘာဝအားဖြင့် algo စနစ်များသည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သဘာဝကျသည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်အရှိန်အဟုန်ကုန်သွယ်မှုသည်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မတက်မချင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော်အက်ပဲလ်၏စတော့ခ်ျများသည်လေးပတ်အတွင်းမြင့်တက်နေသောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကြာမီအချိန်တွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်လုံးဝမရှိပါ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ algorithmic trading protocol သည်စျေးကွက်ပဲ့ပြင်မှုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါရာထူးများကိုရှာဖွေရန်ရှာလိမ့်မည်။
နွားစျေးကွက်အတွင်းစျေးကွက်ပြုပြင်ခြင်းကိုမကြာခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသူတို့၏အကျိုးအမြတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်စွပ်စွဲလေ့ရှိသည် - ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ချက်ကိုအနည်းငယ်ရွေ့လျားစေသည်။ သို့သော်အရှိန်အဟုန်နှေးကွေးသည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းမရှိပါက algorithmic trading protocol သည် '၀ ယ်ခြင်းသို့ကျသည်' ကိုကြည့်လိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဝက်ဝံဈေးကွက်တွင်ရှိလျှင်၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအထက်သို့ ဦး တည်သည့်အခါအရောင်းအမိန့်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
🥇️ Arbitrage ထရေးဒင်း
Arbitrage ကုန်သွယ်မှုသည်စျေးကွက်သို့မည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားသည်ဖြစ်စေအမြတ်အစွန်းကိုအာမခံပေးသောအလွန်ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အယူအဆသည်ဖလှယ်မှုနှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက် ပို၍ ဈေးမကြီးသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုမှအကျိုးရရန်ဖြစ်သည်။
Exchange 1 ရှိ Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏ ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းမှာ ၈၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
Exchange2တွင် Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏ရောင်းဈေးမှာဒေါ်လာ ၈၅.၂၀ ဖြစ်သည်
Layman ၏စည်းကမ်းချက်များအရ Nike ရှယ်ယာများ၌ ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၈၅.၀၀ နှင့်ပြီးနောက်ဒေါ်လာ ၈၅.၂၀ ဖြင့်ဝယ်ရန်အမှာစာနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်များမည်သည့်လမ်းဖြင့်သွားသည်ဖြစ်စေသင်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းအမြတ်ငွေ ၀.၂၄% ရရှိသည်။
ခုံသမာဓိကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာအခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါသူတို့သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာလုပ်လေ့မရှိချေ။ ၎င်းသည်လူ့ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်လိုအပ်သောကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အချိန်သတ်မှတ်ချက်အလွန်နည်းပါးသည်။
တကယ်တော့သင်ဟာကုန်သွယ်မှုနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုလိုအပ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့သာရနိုင်မယ်ဆိုရင်သင်ဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, algorithmic ကုန်သွယ် software ကို milliseconds တစ် ဦး ကိစ္စအတွက်လိုအပ်သောဝယ်ယူရောင်းချမှုအမိန့်နေရာနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာ Exchange 1 ရှိဝယ်ယူမှုအမှာစာ၊ ၂။ Exchange order ရှိရောင်း ၀ ယ်မှုအပိုင်းတွင်လိုအပ်သော entry point များ၌ငွေအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်လူ့ကုန်သည်သည်မည်ကဲ့သို့အတိအကျတွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကိုလည်းဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီကိုသူတို့၏အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်နိုင်အောင်များစွာလုပ်နိုင်သော်လည်း၊ ထပ်မံ၍ ၎င်းတို့သည်စံချိန်တင်အမြန်နှုန်းဖြင့်လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
လူ့ကုန်သည်များဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ငွေဖြစ်လွယ်မှုအချို့သို့မဟုတ်အချို့ကိုစားမိလိမ့်မည်။ သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ algorithmic trading bot သည် milliseconds များအတွင်းအထက်ပါအချက်များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
🥇️ Revision Trading ဆိုသည်
algorithmic software ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အလွယ်တကူဖြန့်ချိနိုင်သည့်အပိုဆောင်းကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာသည်ယုတ်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်း၏သမိုင်းဝင်စျေးနှုန်းပျှမ်းမျှသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ဟူသောသီအိုရီ၏ဗဟိုများ။
ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသည်၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းအရဈေးနှုန်းကွာခြားမှုမှကွဲပြားနိုင်သည်ကိန်းဂဏန်းအရအဓိကအထက်သို့သို့မဟုတ်အောက်သို့ချိုးဖောက်ခြင်းသည်ယုတ်လျော့မှုကိုပြန်ပေးသင့်သည်။ ဥပမာ - Dow Jones ကိုရောင်းရန် algorithmic bot ကိုသတ်မှတ်ထားသည်ဆိုပါစို့။ ရိုးရှင်းအောင်ထားရန်, Dow သည်နေ့ ၂၀၀ အတွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့် ၅% အတွင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်ဖြစ်သည်။
Doe ဂျုံးစ်သည်ကာလတိုဝက်ဝံဈေးကွက်သို့ ၀ င်ပါက ၂ လအကွာအဝေးတွင် ၂၀% ဆုံးရှုံးသွားပါက algorithmic trading protocol သည် ၀ ယ်ရန်အမှာစာပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ စာရင်းအင်းအရဖြစ်နိုင်ခြေမှာ Dow Jones သည်၎င်း၏ရက်ပေါင်း ၂၀၀ အတွင်းရွေ့လျားပျမ်းမျှ၏ +/- 20% အကွာအဝေးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Algorithmic Trading Provider ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
သင်ဤလမ်းညွှန်ကိုယခုအထိဖတ်ရှုပြီးပါက algorithmic အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အာမခံထားသည့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်သေချာပေါက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီကဲ့သို့သောဖြောင့်ရှေ့ဆက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်နောက်ခံဆော့ဖ်ဝဲသည်၎င်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောလူ (သို့) လူအုပ်စုကဲ့သို့သာလျှင်ကောင်းသည်။
ဥပမာ algo bot သည်အောက်ဖော်ပြပါကုန်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုရန်ပရိုဂရမ်သွင်းထားပါက၎င်းသည်၎င်းကိုအတိအကျလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွင်းသို့ထည့်သွင်းထားသောကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အခြေအနေများကိုလိုက်နာရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သာတည်ရှိသည်။ ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးအောက်မှာသင်ဟာတရားဝင် algorithmic trading provider ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းအချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: သင်ကိုယ်တိုင် သုတေသနပြုလုပ်ရန် အချိန်မရှိပါက၊ ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အယ်လဂိုရီသမ်ကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သုံးဦးကို သင်တွေ့ရပါမည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအစမှာ algo trading provider ၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အိမ်စာအချို့လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်အတိတ်နှင့်လက်ရှိသုံးစွဲသူများသည်ပံ့ပိုးသူနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းသည်အလွန်သင့်လျော်သည်။
စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောမက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသော algo ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သို့မဟုတ်လစဉ်အမြတ် ၆၀% ရရှိသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သုံးစွဲလိုပါသလား။ အရေးကြီးသည်မှာ အကယ်၍ သင်ပံ့ပိုးသူ၏တောင်းဆိုချက်များမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုသင်ပေးသင့်သည်။
✔️ သရုပ်ပြ Facility
ကျနော်တို့သရုပ်ပြစက်ရုံတည်ရှိမှုထွက်ကြည့်ရှုရန်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်ကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဟာ algorithmic ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုစမ်းသပ်မှုကိုတောထဲမပို့ခင်မှာစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသည်မှာ bot သည်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်တွေ့ရှိခဲ့ပါကသင်ရရှိထားသည့် ၀ င်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်ရန်မရရှိခြင်းကြောင့်ကြိုးကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
သရုပ်ပြအဆောက်အ ဦး ၏ထိပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သော algo trading sites များကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ဥပမာ - အကယ်၍ ပလက်ဖောင်းသည်ရက် ၃၀ မှငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံကိုကမ်းလှမ်းပါကသင်၏ subscription တွင်ငွေပြန်အမ်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းပုံစံတွင်အလုပ်လုပ်သော algorithmic trading provider တစ်ခုကိုရွေးချယ်သင့်သည်မှာသေချာသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာပံ့ပိုးသူသည်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုတသမတ်တည်းပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ မလုံလောက်ပါကပေးသွင်းသူသည်ဖောက်သည်များအားငွေပြန်အမ်းမည်ကိုသိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကြီးမားသောတစ်ကြိမ်ပေးရသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုသင်အသုံးပြုပါက algo bot သည်နိမ့်ကျနေလျှင်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
In-House Algo ကုန်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်ပွဲစားများနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှု
သင်၏ကုန်သွယ်မှုများမည်သို့အမှန်တကယ်နေရာချမည်ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အွန်လိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကုန်သွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည် - ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကုန်သွယ်မှုပြုသူသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များသို့ bot ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
In-House Algo ကုန်သွယ်မှု
အချို့သော algorithmic အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းများသည် All-In package တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသူကအလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်များကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးဆောင်စာရင်းများဖြင့်ထားရှိမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အမြတ်အစုရှယ်ယာကိုကော်မရှင်လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားကော်မရှင်နှုန်းထားဖြင့် ၁၀% နှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဟုဆိုပါစို့။ မေလလတွင် algo ဆော့ဖ်ဝဲသည် ၄၅% ပြန်ပေးလျှင်၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၂၅၀ ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်ကိုဒေါ်လာ ၂၂၂ နုတ်လိုက်တာနဲ့အမြတ်အစွန်းဟာဒေါ်လာ ၂,၀၂၅ ရစေပါတယ်။
အချို့ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ algo software ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပိုမိုထိန်းချုပ်လိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ပွဲစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်ပံ့ပိုးပေးသည့်ပံ့ပိုးသူကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သည်။ Layman ၏စည်းမျဉ်းများအရ၎င်းသည် algorithmic bot သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပွဲစားအကောင့်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အများအားဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်၎င်းနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည် MT4 သို့မဟုတ် MT5 ဆိုလိုသည်မှာရာနှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင် bot သည်အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး Algorithmic ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူများ
သင့်ကိုယ်စား 24/7 တွင် algo bot အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း၏အသံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ၂၀၂၀ ၏ထိပ်ဆုံးပံ့ပိုးပေးသူသုံးခုကိုအောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ အမြဲတမ်းသင်၏ငွေနှင့်မခွဲမခွာခင်သင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
၃။ Profit Pros သည်ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်အရှိဆုံးကုန်သွယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်နေ့စဉ်ဒေါ်လာ ၁,၅၀၀ မှ ၄,၂၀၀ အထိရကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာသည်ကမ္ဘာ့ crypto နှင့် Profit Pros 24/7 ကိုစောင့်ကြည့်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်ခွင့်ဖြစ်သော 'Profit Pros' ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ algorithm သည်အသုံးပြုသူများကိုတစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကျော်ရရှိစေသည်
$ / £ 250 Min သိုက်
Debit နှင့် Credit Card ကိုလက်ခံပါသည်
Profit Pro သို့လာရောက်ပါ
၄။ အဓိကအားသာချက် - ဒီနေ့ကစပြီးတစ်နေ့ကိုဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အထိရနိုင်ပါတယ်
Prime Advantage ၏ပြောကြားချက်အရ algo trading bot သည်အမြတ်အစွန်းအားအမြတ်အစွန်းကိုအမြတ်အစွန်း (၃) သန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံတွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကုန်သည်များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သင်အဖွဲ့သည်စျေးကွက်တွင်အားသာချက်တစ်ခုအမြဲရှိသည်ကိုသေချာစေရန်နည်းပညာအပြည့်အဝထောက်ပံ့သည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်း - Edge နည်းပညာ
ကြယ် ၅ ပွင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
100% In- အိမ်သူအိမ်သားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး
သာ cryptocurrency ကုန်သွယ် - အဘယ်သူမျှမ CFDs သို့မဟုတ် Forex
(၂) CFD Trader - အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးတွင်ငွေရေးကြေးရေးအရအမှီအခိုကင်းရမည်
CFD Trader သည် algorithmic trading system ကိုမကြိုးစားရသေးသောသူများနှင့်သင့်တော်ပါသည်။ ၀ င်ငွေအလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ယူရို ၂၅၀ သာရှိသောကြောင့်ပလက်ဖောင်းသည်အိမ်တွင်းကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးသည်သင့်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအချိန်မရွေးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏နံပါတ် ၁ အကောင်းဆုံး CFD ပွဲစားကိုတိုက်ရိုက်အခမဲ့ရယူပါ
လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပထမ ၄၈ နာရီအတွင်းအခမဲ့ 1on1 နည်းပြခေါ်ဆိုမှု ၁
၄။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်၍ Crypto Trader နှင့်စတင်ကြွယ်ဝပါ။
Crypto Trader သည် Bitcoin ကမ်းလှမ်းသောရူးသွပ်ရာမှပြန်လာကြသူများနှင့်သီးသန့်သီးသန့်သီးသန့်ထားထားသောအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များသည်လတိုင်းလတိုင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌အပန်းဖြေအနားယူခြင်းကိုနှစ်သက်ကြပြီးတစ်နေ့လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာအလုပ် လုပ်၍ လက်ပ်တော့တွင်ငွေရှာနေကြသည်
အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၅၀ အပ်ငွေ
ကျော် 2,000 ကုန်သွယ်တူရိယာ
မိုဘိုင်း app ရရှိနိုင်
နေရာအများစုတွင်လူ့ကုန်သည်ထက်သာလွန်သော algorithmic software သည်ငြင်းဆန်။ မရပါ။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ၂၄/၇ အခြေခံပြီးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်ဖြစ်စေ၊ အချိန်တိုင်းတွင်နည်းပညာညွှန်းကိန်းရာပေါင်းများစွာကိုချထားသည်ဖြစ်စေ၊ အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုမီလီစက္ကန့်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေထည့်သွင်းထားသည်ဖြစ်စေ - algo-bot များသည်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိ။
နောက်ဆုံးမှာတော့နည်းပညာဟာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သင်ဟာလက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုမတင်ဘဲတသမတ်တည်းအမြတ်ထွက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော algo trading provider ၏အထောက်အထားများကိုသုတေသနပြုရန်အချိန်များစွာဖြုန်းဖို့လိုသေးသည်။ အနည်းဆုံးတော့စက်မှုလုပ်ငန်းသည်လိမ်လည်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
လမ်းတစ်လျှောက်၌သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်စစ်ဆေးထားသော algo ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များသုံးခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အာကာသအတွင်းကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိနေသည်။
ငါအခမဲ့ကုန်သွယ် algorithmic ကုန်သွယ် software ကိုအသုံးပြုသင့်သလဲ
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာဘဏ္yearsာရေးစျေးကွက်များထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်အဆင့်မြင့် algorithmic bot တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်သင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးချပြီး၎င်းကိုအခမဲ့ပေးဆပ်ရန်သာလော။
Algorithm ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူတစ် ဦး မှတရားဝင်လျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
algorithmic အရောင်းအ ၀ ယ်နေရာသည်ရဲရင့်သောတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်သောလိမ်လည်သူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်လက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီသုတေသနအမှိုက်ပုံ၏လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၎င်းသည်ပေးသူ၏သက်သေပြထားသည့်သမိုင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီးကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လစဉ်အမြတ် ၇၀ ရာနှုန်းရှိတဲ့ bot အတွက် ၂% ပဲရတာထက်အများကြီးပိုပေးရလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ algorithmic အရောင်းစက်ရုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာများကိုမည်သို့လိုက်နာနိုင်မည်နည်း။
ဆော့ဖ်ဝဲ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုရယူရန်ခွင့်ပြုမှသာသင် algorithmic trading provider ကလုပ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် code ကို third-party များနှင့်မျှဝေခွင့်ပြုသည့်အတွက်ဤကိစ္စသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုမစွန့်စားဘဲ algorithmic trading software ကိုစမ်းသပ်နိူင်ပါသလား။
အချို့ကိစ္စများတွင်ဟုတ်ကဲ့။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေကိုမစွန့်လွှတ်ခင် bot ကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အိမ်တွင်းသရုပ်ပြစက်ကိုပေးတဲ့ပံ့ပိုးပေးသူတွေကိုပိုကြိုက်တယ်။
အဘယ်အရာကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတန်း algorithmic ကုန်သွယ် software ကိုပစ်မှတ်ထားသလဲ?
နီးပါးတိုင်းစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစား! အရေးကြီးသည်မှာ algorithmic trading bot များသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သောစျေးကွက်အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
ငါ algorithmic ကုန်သွယ် software များအတွက်ဘယ်လိုပေးဆောင်သလဲ?